बालबालिका « Janata Samachar
गोठालो जाँदा लाएको माया…
मुलुकमा लकडाउन भएकाले अहिले देशभरका विद्यालयहरु बन्द रहेका छन् ।
लकडाउन खुकुलो पारिँदै, बालबालिकालाई राहत
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीबाट अत्यन्त प्रभावित मध्येको एउटा देश स्पेनले गएको २४ घण्टामा एक महिनायता सबैभन्दा कम मृत्यु भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतवार २ सय ८८ मानिसको मृत्यु
लकडाउनका बेला कन्टेनरमा लुकेर आएका बालबालिकासहित ५२ जना पक्राउ
काठमाडौं । लकडाउन उल्लंघन गरेर नेपालका विभिन्न शहरबाट मालवाहक लरीको खाली कन्टेनरमा लुकेर आएका ३ बालबालिकासहित ५२ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौंबाट भरतपुर हेटौंडा हुँदै आएको ना ५ ख
काठमाडौं । बालबालिकालाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट कसरी बचाउने ? भन्ने चिन्ता अभिभावकमा अवश्य हुन्छ । भनेको नमान्ने साना बालबालिका तथा नवजात शिशुको सुरक्षाका लागि यो चिन्ताको विषय हो ।
आठ हजार डलरकाे दरले २६६३ बालबालिका बिक्री !
काठमाडौं । नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर राज्य आफैले २० वर्षमा २६ सय ६३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पेको
फाइल तस्बिर तनहुँ । जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा २० महिनाको अवधिमा चितुवाको आक्रमणबाट ८ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । चितुवाको आक्रमणबाट भानु नगरपालिकामा ६, शुक्लागण्डकीमा १ र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १ बालबालिकाले
तनहुँ । एकीकृत हरित विकास नेपालले इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका ३९ बालबालिकालाई न्यानो कपडा तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । व्यास नगरपालिका –११ बेलटारीको घाँसीकुवाका वडाध्यक्ष नीरबहादुर खड्काले
रविन्द्र सिंह ठकुरी बाँके । पुस्तकालयमा युवा भन्दाबढी जागिरबाट रिटायर्ड भएकाहरु र बालबालिकाहरु देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै पुस्तक अध्ययनमा युवाहरु सक्रिय देखिन छाडेका छन्